Hifehy ny filaminana sy ny fiainana manokana amin'ny iPhone miaraka amin'ny Bitdefender | Vaovao IPhone
Fehezo ny fiarovana sy ny fiainana manokana amin'ny iPhone miaraka amin'ny Bitdefender
Jose Alfocea | | Fampiharana iPhone, IPhone Security
Ny fiarovana sy ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra manokana sy ny mombamomba anay ary ny asanay dia zava-dehibe. Ny ankamaroan'ny fiainantsika dia hita taratra sy voatahiry ao amin'ny iPhone amin'ny fomba toy izany, raha latsaka amin'ny tanana tsy mety izy dia mety hahafaty.
Soa ihany fa ny iOS no rafitra fandidiana finday azo antoka indrindra any, saingy tsy lavorary izany, indrindra rehefa miankina amin'ny halatra na fatiantoka ny fitaovana. Na dia amin'ireto tranga ireto dia manana iCloud sy fitaovana Find My iPhone izay manampy anay hitady izahay na, raha tsy izany dia hamafa sy hanakana ny atin'ny terminal rehetra ary hiaro ny fampahalalana ho azo antoka. Izahay dia tsy hilaza aminao amin'ity lahatsoratra ity fa tsy fitaovana mahomby izy io, satria handainga izahay, fa angamba aleonao manandrana safidy hafa izay maimaim-poana koa ary hanome anao ny fanaraha-maso ny angona sy ny mombamomba anao: Bitdefender Mobile Security ho an'ny iOS.
1 Bitdefender Mobile Security, safidy iray hafa amin'ny Find my iPhone for iOS
2 Inona no atolotry Bitdefender ahy
Bitdefender Mobile Security, safidy iray hafa amin'ny Find my iPhone for iOS
Tsy mbola mila mampiasa ny fitaovana «Find My iPhone» hita ao amin'ny faritra iCloud ao amin'ny toe-javatra iPhone ianao, fa, raha tsy fantatrao izany, dia fiarovana azo ampiasaina ahafahantsika mahita fitaovana misy antsika very, na nangalatra izany na navelantsika tao an-tranon'ny namana izany. Ary raha tsy azo atao ny mahita azy dia azontsika atao ny manakana azy io sy mamafa ny ao anatiny rehetra mba tsy hahita na hampiasa ny angon-drakitra izay mahita azy, na izay nangalatra azy.
Noho izany, fitaovana tena ilaina izy io izay tsy maintsy navotantsika rehetra tamin'ny iPhone. Na izany aza, Raha ny filaminana sy ny fiainana manokana no resahina, maninona no mametra ny tenantsika amin'ny fitaovana iray fotsiny? Noho io antony io no horesahiko anio Bitdefender Mobile Security ho solony na ho famenon'ny fiarovana efa natolotr'i Apple antsika amin'ny iOS. Ho fanampin'izay, fitaovana maimaimpoana tanteraka izy io ka tsy handany vola na inona na inona ianao hiaina milamina kokoa.
Inona no atolotry Bitdefender ahy
Araka ny efa nambarantsika tany am-piandohana, amin'ny iPhone na iPad dia manana fampahalalana marobe isika, ary tsy ny angona mifandraika amin'ny kaonty any amin'ny banky, ny carte de crédit na ny debit ihany ary ny fahazoana mombamomba ireo tranonkala sy tambajotra sosialy marobe, fa isika koa miresaka momba ny sarinay sy ny lahatsarinay, afaka mamoaka vaovao misimisy kokoa noho izay azontsika eritreretina tamin'ny voalohany, ny fifandraisana, ny resaka manokana, ny mailaka, ny antontan-taratasy sy maro hafa. Ka, Bitdefender Mobile Security manome fifehezana ireo fampahalalana mafampana izay notahirizinay amin'ny iPhone na iPad antsika, na dia very na nangalarina aza ilay fitaovana.
Bitdefender mihodina manodidina ny lafiny roa tena lehibe amin'ny fiainantsika: fiantohana ny tsiambaratelo momba ny kaontintsika, ary mitazona fiarovana raha sendra misy halatra na fatiantoka avy amin'ny terminal.
Miaraka amin'ny BitDefender azonao atao fantaro amin'ny fotoana rehetra raha mbola azo antoka ny kaonty mailakao. Noho ny haitao maoderina indrindra an'ny mpitondra eran-tany amin'ity sehatra ity toa ny BitDefender dia tsy maintsy manamarina ny adiresy mailaka fotsiny ianao ary hizaha izany ny Bitdefender Mobile Security mba hahitana raha voahitsakitsaka ny fiainanao manokana ary raha voahitsakitsaka izy. izao no fotoana hanovana ny teny miafina.
Etsy ankilany, noho ny asany miady amin'ny halatra, ary tontonana fitantanana tena mora ampiasaina sy mora ampiasaina, azonao atao ny mitadiava lavitra, mihidy ary mamafa ny iPhone na iPad anao. Amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa tsy azo idiran'ny olona mahita azy ny terminal anao, ary mazava ho azy fa ho an'ny mpangalatra ihany koa.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, BitDefender dia fitaovana maimaimpoana tanteraka izay manana ny voninahitr'ity orinasa mitarika ity koa. Koa mamporisika anao aho hanandrana azy. Tsy handray anao mihoatra ny iray minitra handaminana azy ianao, tsy handany vola euro akory ianao, ary ho milamin-tsaina sy hilamin-tsaina ianao.
Bitdefender Mobile Securitymaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fehezo ny fiarovana sy ny fiainana manokana amin'ny iPhone miaraka amin'ny Bitdefender
Serivisy molotra be dia be ho an'ny dokambarotra
Dolan dia hoy izy:
Tena mahaliana fa ny fanontaniako dia, inona ny tombotsoan'ity fampiharana ity? Mamerina fampahalalana? Tsy misy na inona na inona maimaim-poana ary ity app ity dia hahazo tombony kely ho antsika. Ho ahy manokana, misalasala be aho fa mampiasa an'ity karazana fampiharana ity, mainka izany rehefa omeko azy rehetra eo amin'ny lovia volafotsy ny fifehezana ahy.
Zavatra hafa rehefa mitsidika ny pejy misy sorabaventy hita any ambany, azafady mba ahenao ny haben'ny sora-baventy izay manondro ny fanekena cookies dia lehibe tokoa. Tena ho ahy dia heveriko fa mahasosotra tokoa izany. Ahenao ny habe na asio X hanafoanana ny sora-baventy. MISAOTRA
Valiny tamin'i Dolan
Monitor dia hoy izy:
Tabataba sy verbiage ary voanjo vitsivitsy mahaliana ahy.
Tsy misy zava-dehibe. Tsy liana amin'izany aho.
Valiny tamin'i Monitoor
Eclipsnet dia hoy izy:
Tsy fantatro fa nisy ireo karazana fampiharana ireo ary raha tsy niara-niasa tamin'ny iOS izy ireo, nanomboka oviana i Apple no nanome fidirana lalindalina amin'ny rafitra hahafahana manakana na mamafa ny fitaovana lavitra amin'ny antoko fahatelo?
Somary lany daty ve aho sa tsy ny fandokoan'izy ireo?
Valiny amin'ny Eclipsnet
Photomath mamela anao hanao kajy avy amin'ny fakantsary iPhone
ITunes U Collections nafindra tao amin'ny iOS Podcast App